अष्ट्रेलियाको भिसा आवेदनमा माइग्रेसन एजेन्ट किन आवश्यक छ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अष्ट्रेलियाको भिसा आवेदनमा माइग्रेसन एजेन्ट किन आवश्यक छ ?
अष्ट्रेलियाको भिसाबारे निर्णय गर्ने कुरामा माईग्रेसन एजेन्टको कुनै भूमिका हुँदैन । तर सही माईग्रेसन एजेन्ट छान्न सके उसले भिसाको निर्णय सकारात्मक आउने वातावरण बनाउन भने सक्छ । अर्थात माईग्रेसन एजेन्टको अनुभवको आधारमा भिसाको प्रक्रियालाई सहज र सकारात्मक बनाउन सक्छ ।
त्यसैले माईग्रेसन प्रक्रिया सुरू गर्दा सही एजेन्टको छनौट गर्न आवश्यक छ । किनभने अनुभवी माईग्रेसन एजेन्टले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया उपयुक्त ढंगमा मिलाउन सक्छन् । भिसा प्रक्रियाका लागि यो आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ ।
अष्ट्रेलिया आएका नेपाली मध्ये कतिको माईग्रेसन प्रक्रिया सजिलै सकिएको छ भने कतिको झन्झटिलो रूपमा अघि बढेको होला । अष्ट्रेलियाको पीआर पाउने आशामा पाँच सात वर्ष देखी ४५७ (कामदार) भिसामा बँधुवा कामदारको रूपमा पिल्सेर बसेकाको संख्या पनि उल्लेख्य छन् । पीआरको लागि कागत बन्ने आशामा उल्टो ५०–६० हजार डलर तिरेर पैसा पनि लिने र काम पनि लगाउने नेपाली तथा भारतीय होटल, रेस्टुरेन्ट मालिकहरु पनि छन् । माईग्रेसन एजेन्टको गलत सुझाव तथा गलत माईग्रेसन एजेन्टको छनौटको परिणाम हुन् यी । त्यसैले सही सुझाव पाउन र पीआरको प्रोसेस छिटो टुंग्याउँन अनुभवी माईग्रेसन एजेन्टको छनौट गर्न आवश्यक छ ।
अर्को कुरा अनुभवले नै विशेषज्ञता विकास हुने भएकाले माईग्रेसनको लागी अनुभवी माईग्रेसन एजेन्ट छान्नु सबैभन्दा राम्रो निर्णय हो । जति धेरै वर्ष देखि माईग्रेसनको काममा लागेको एजेन्ट हुन्छ त्यो त्यति नै अनुभवी र माईग्रेसनको क्षेत्रको विज्ञ पनि हुन्छ । किनभने उसले लामो समय देखि पीआर, टीआर तथा अन्य अष्ट्रेलियाको भीसा सम्बन्धी जानकारी प्रक्रिया र सफलता असफलता भोगेको हुन्छ ।
माईग्रेसन आफैंमा गम्भीर विषय र प्रक्रिया भएकाले यसकालागि अनुभवी एजेन्ट छान्नु बुद्धीमानी ठहरिन्छ ।